၀ န်ကြီး Turhan ကTÜVASAŞ 'အထူးပြုမည်မဟုတ်ပါ' ဟူသောနောက်ဆုံးအချက်ကိုပြောကြားခဲ့သည် | RayHaber | raillynews
[31 / 03 / 2020] အီမာမိုဂလိုသတိပေးချက် -“ အစ္စတန်ဘူလ်မှာညမထွက်ရအမိန့်ကိုကြေငြာသင့်တယ်”	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[31 / 03 / 2020] ပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီး Soylu 'လူမှုဘ ၀ ကိုအထီးကျန်စေခြင်းအားဖြင့်ဘ ၀ ၏ ၉၅% ကိုအိမ်ပြန်ရောက်စေခဲ့သည်'	03 Afyonkarahisar
[31 / 03 / 2020] ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်း ၆၂ ခုအတွက်နောက်ထပ်ခန့်အပ်မှု ၆၀၀၀ ၂၁၉ ခုကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်	06 တူရကီ
[31 / 03 / 2020] 30.03.2020 Coronavirus အစီရင်ခံစာ - ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနာ ၅၉ ဦး ကိုဆုံးရှုံးခဲ့သည်	coronavirus
[30 / 03 / 2020] ကမ္ဘာပေါ်တွင် Coronavirus ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်သည် ၆၇၇,၀၀၀ သေ။ ၃၁,၀၀၀ ကျော်ခဲ့သည်	လောက
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး54 Sakarya၀ န်ကြီး Turhan ကTÜVASAŞအား“ အထူးပြုမည်မဟုတ်ပါ” ဟုနောက်ဆုံးမှတ်ချက်ချသည်
၀ န်ကြီး Turhan ကTÜVASAŞအား“ အထူးပြုမည်မဟုတ်ပါ” ဟုနောက်ဆုံးမှတ်ချက်ချသည်
20 / 03 / 2020 54 Sakarya, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, Institute, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, Tüvasas, တူရကီ
ဝန်ကြီး Turhan ပတ္တူအပေါ်နောက်ဆုံးအချက်ထားကြ၏
ကြောင့်ကုမ္ပဏီမှတူရကီသမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံတော်မီးရထားအပြီးအပိုင်အလောင်းတော်ထားရာ၌စွပ်စွဲချက်နှင့် ပတ်သက်. ပြီးခဲ့သည့်TÜVASAŞဝန်ကြီး Turhan နောက်ဆုံးအချက်အတွင်းနှစ်ခုသည်အခြားTÜRASAŞနှင့်အတူပေါင်းစည်း။ တူရကီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာဥက္ကPresident္ဌ Sen M. Nurullah Albayak ၏ခရီးစဉ်တွင်ဝန်ကြီး Cahit Turhan က "TÜVASA privat ကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ပိုပြီးတိုးတက်လာလိမ့်မယ်" ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်နယ်မီးရထားလုပ်ငန်းမှရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတူရကီ Wagon စက်မှုဝန်ကြီးဌာန (TÜVASAŞ), တူရကီစက်ခေါင်းအင်ဂျင်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန (TÜLOMSAŞ) နှင့်တူရကီမီးရထားစက်များစက်မှုဝန်ကြီးဌာန (TÜDEMSAŞ) အပူတူရကီရထားစနစ်အသုံးအဆောင်များစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကော်ပိုရေးရှင်း (TÜRASAŞ) ပူးပေါင်းနှင့်အတူထူထောင်ခဲ့။
ဤပေါင်းစည်းမှုအပြီးတွင်မှတ်ချက်ပေါင်းများစွာကို“ အခြားသူတစ် ဦး ထံရောင်းချလိမ့်မည်” နှင့်“ TÜRASAŞကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်အဖြစ်” အဖြစ်မှတ်ချက်ချသည်။
မကြာသေးမီကတူရကီ Kamu-Sen ကသမ္မတÖnder Kahveci နှင့်တူရကီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး-Sen ဥက္ကဋ္ဌ m.nurullah Albayrak လုပ်ထင်ကြေးပေါ်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံန်ကြီးအမ် Cahit Turhan လာရောက်လည်ပတ်အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
TÜVASAŞနှင့် National Train Project တို့အဓိကဆွေးနွေးခဲ့သည့်အစည်းအဝေးတွင် ၀ န်ကြီး Turhan က“ TÜVASAŞကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူး၊ ပိုပြီးအားကောင်းအောင်လုပ်နေတယ်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သူကပြောပါတယ်။
အစည်းအဝေးအပြီးတွင်တူရကီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - Sen သမ္မတ M. Nurullah Albayrak၊ Türkkletişim-Sen အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤထူးခြားသည့်ခွဲများ (၃) ခု၏ပေါင်းစည်းမှုကို ၂ နှစ်ခန့်ကြာမြင့်စွာရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။ ပိုစတာများနှင့်စာတမ်းများကိုပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏သဘောထားကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤအဖွဲ့အစည်းများသည်နှစ်ပေါင်းများစွာအောင်မြင်စွာလည်ပတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဌာနချုပ်၏အရည်အချင်းများကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်၎င်းအဖွဲ့အစည်းများအားကျုံ့သွားစေနိုင်သည်။
ကျနော်တို့သူတို့တစ်ခုတည်းအိမ်ခေါင်မိုးအောက်မှာ, သူတို့လည်ပတ်ရသောပြည်နယ်များအဘို့အကြီးမြတ်အရေးပါမှုနေသောဤအဖွဲ့အစည်းများ၏စုရုံး, ဤပြည်နယ်များအတွက်လုပ်ခံရဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုလျှော့ချလိမ့်မယ်, စီးပွားရေး, သူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဝင်ငွေသူကိုအထူးသဖြင့်န်ထမ်းများအကျိုးသက်ရောက်စေလိမ့်မည်ဟုထင်ကြပါပြီ, ဤပြည်နယ်များတွင်နေထိုင်သူအပေါင်းတို့နှင့်ပြည်နယ်များဤအလုပ်အကိုင်အခွင့်အတိုး။
ဤအရာများအပြင် Sivas လက်ထောက် Mr. Ahmet Özyürekနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး TBMM တွင်အစီအစဉ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြခဲ့သည်။ ပါလီမန်၏ခေါင်မိုးအောက်တွင်တူရကီ Grand National Assembly ၏ထီးအောက်တွင်လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်သည်ဒုတိယအကြိမ်လည်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာအစကသမ္မတÖnder Kahveci မစ္စတာ Bey Sakarya TÜVASAŞနှင့်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်ဒီလမ်းအတွက်ဆက်လက်စက်ရုံ၏ညှနျကွားအတွက်စာနယ်ဇင်း၏ status များဖော်ပြချက်တို့သည် လာ. သွားရောက်လည်ပတ်တူရကီ Kamu-Sen ကျင်းပခဲ့တယ်။
နိုင်ငံရေးသမားများသည်ဆုံးဖြတ်ချက်အချို့ချနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တူရကီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - Sen အနေဖြင့် ၀ န်ထမ်းများ၏အခွင့်အရေးကိုနိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံအားပထမ ဦး စွာပြောကြားခြင်းအားဖြင့်လိုက်နာဆောင်ရွက်လိမ့်မည်မှာသေချာသည်။
နောက်တစ်ချိန်တွင် Sakarya ရှိအစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများကိုအတူတကွ စုပေါင်း၍ TÜVASAŞကိုတောင်းဆိုပါ။ ဒီအခြေအနေမှာဝန်ကြီးနဲ့စကားပြောပြီးအမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်။ သူကTÜVASAŞနှင့်TÜRASAŞတို့ကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်လုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုကတိပေးခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၎င်းက ထပ်မံ၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ (Hakan Turhan /Medyab ဖြစ်ပါသည်)
Sivas အတွက် YHT ဘူတာရုံအဆုံးမှတ်ကသမ္မတကို တင်.
CHP Sındır, ဆွေးနွေးချက်İZBAN Koydu ၏ပွိုင့်
ဝန်ကြီး Turhan သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများအကြောင်းအရေးကြီးသတင်းအချက်အလက်
ရာစုစီမံကိန်း Marmaray ဆုံးမှတ်ရောက်ရှိခဲ့သည်
အဆိုပါထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာ Trabzon န်ကြီးချုပ်အာဒိုဂန်အတွက်အန္တိမထားမည်
ဝန်ကြီး Arslan, လမ်းကြောင်းတူရကီ-Izmir YHT ဆွေးနွေးငြင်းခုံပေါ်တွင်မှတ်ထား
Turhan Ataturk လေဆိပ်ဝန်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးတောင်တက်ကြော်ငြာခဲ့ Make
ဝန်ကြီး Turhan ခြင်းဖြင့်ကြေညာချက် Make မှ Ataturk လေဆိပ်ကနေနောက်ဆုံးလေယာဉ်ခရီးစဉ်
ဝန်ကြီး Turhan TÜVASAŞခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ်
Turhan သည် YHT ၏ကြေးပေးသွင်းမှုနှင့် Eurasia ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းခများအကြောင်းပြောဆိုသည်
Last Minute: Gürses၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူသိက္ခာတော်ရဆရာ Nur ကသူ့အသက်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့သည်
Coronavirus ဆောင်ရွက်ချက်များအရ Istanbul လေဆိပ်ကားရပ်နားရန်နေရာ
AŞTİအားသွင်းထားသောMehmetçikသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို EGO ဘတ်စ်ကားများကထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်
TCDD Biçerova Nemport ဆိပ်ကမ်းဆက်သွယ်မှုလိုင်းပြီးစီးပါပြီ
အီမာမိုဂလိုသတိပေးချက် -“ အစ္စတန်ဘူလ်မှာညမထွက်ရအမိန့်ကိုကြေငြာသင့်တယ်”
ပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီး Soylu 'လူမှုဘ ၀ ကိုအထီးကျန်စေခြင်းအားဖြင့်ဘ ၀ ၏ ၉၅% ကိုအိမ်ပြန်ရောက်စေခဲ့သည်'
အများပြည်သူသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုအသုံးပြုသောခရီးသည်အရေအတွက်သည် Ankara တွင် ၈၄ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားသည်
TÜVASAŞထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့သည် .. ! သို့သော်အမျိုးသားရထားလေ့လာရေးအပြည့်အဝဓာတ်ငွေ့ဆက်လက်
ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်း ၆၂ ခုအတွက်နောက်ထပ်ခန့်အပ်မှု ၆၀၀၀ ၂၁၉ ခုကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်
ဘတ်စ်ကားပေါ်သို့အထူးဘတ်စ်ကားစီးရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမှရာဇ ၀ တ်မှုတိုင်ကြားချက်!
Izmir ရှိ Coronavirus အစီအမံများအတွင်းရှိအငှားယာဉ်များကိုကြီးကြပ်ခြင်း!
သမ္မတŞahinသည် Coronary Virus ဖြစ်ပွားမှုကိုဆန့်ကျင်သောအရေးယူမှုများကိုစစ်ဆေးသည်
တင်ဒါကြေငြာချက် - Haliç Metro Pass တံတား၊ ဆုံလည်၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ပျက်ကွက်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုဝယ်ယူခြင်း
6: ဧပြီလ 10 00 @ - 11: 00
9: ဧပြီလ 10 00 @ - 11: 00
တင်ဒါကြေငြာချက် - Metrobus ယာဉ်မောင်းနှင့်မြို့ပြအများပြည်သူသုံးဘတ်စ်ကားမောင်းသူ
9: ဧပြီလ 14 00 @ - 15: 00
တင်ဒါကြေငြာချက် - လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုသည်အချက်ပြစီမံကိန်းများအတွင်းလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်
တင်ဒါကြေငြာချက် - ကွန်ကရစ်အိပ်စက်ခြင်းထုတ်လုပ်မှုတွင်အသုံးပြုရန်ဘိလပ်မြေကိုဝယ်မည်
9: ဧပြီလ 14 30 @ - 17: 30
ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - Ankaray လုပ်ငန်းရထားကြိတ်ခွဲလုပ်ငန်း ၀ ယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်း
9: ဧပြီလ 15 00 @ - 16: 00
13: ဧပြီလ 10 00 @ - 11: 00
တင်ဒါကြေငြာချက် - သင်္ဘောအမှုထမ်းနှင့်စာရေးဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း
14: ဧပြီလ 10 00 @ - 11: 00
တင်ဒါကြေငြာချက် - Sakarya Nostalgic ရထားလိုင်းကိုလုပ်လိမ့်မည် (တင်ဒါဖျက်သိမ်း)
14: ဧပြီလ 10 30 @ - 11: 30
Alstom သည်ဂျာမနီရှိ Hessische Landesbahn ၌ဒေသဆိုင်ရာရထားပြိုင်ပွဲ ၃၀ ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်
ပထမတင်ဒါကို Kanal Istanbul တွင်ပြုလုပ်သည်
Tatvan İskele Right Line Road Renewal Work တင်ဒါရလဒ်
ကန်ထရိုက်တာ ၀ န်ထမ်း ၁၀၂ ဦး ကိုစုဆောင်းရန်Cerrahpaşaဆေးဘက်ဆိုင်ရာဌာန
Samsun Metropolitan KPSS နှင့်အလုပ်ခန့်ရန်ရွှေ့ဆိုင်း
ပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှလက်ထောက်ကျွမ်းကျင်သူ ၁၅ ဦး ခန့်အပ်မည်
ပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှသင်တန်းသား ၁၅ ဦး ခန့်ခေါ်ယူမည်
ပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာနလက်ထောက်စာရင်းစစ် ၁၅ ဦး ဝယ်ယူမည်
TCDD Tasimacilik သည်အလုပ်သမားခန့်အပ်မှု ၁၈၄ ခုကိုရွှေ့ဆိုင်းခဲ့သည်
အစိုးရ ၀ န်ထမ်း ၆၇ ဦး ကိုဝယ်ယူရန်ဆမ်ဆန်ရေနှင့်မိလ္လာစနစ်
Eastern Anatolia ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီသည်ကန်ထရိုက် ၀ န်ထမ်း (၇) ဦး ကိုခန့်အပ်မည်
ဝယ်ယူ Make မှတူရကီစာရင်းအင်းအင်စတီကျု9စာချုပ်န်ထမ်းများ
Bursa Teleferik A.Ş. ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကumb္ဌ kerlker Cumbul သည် Coronavirus အားဖမ်းမိခဲ့သည်။
Denizli Metropolitan သည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်ပိုးသန့်ဆေးရန်အလွန်အရေးကြီးသည်
Piyer Loti နှင့်Taşkışla Cable Car Expeditions ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားသည်
EGO ဘတ်စ်ကားများ၊ Metro နှင့် ANKARAY များတွင်အဲယားကွန်းစနစ်ပိတ်ထားလိမ့်မည်
ယခုခရီးသွားများသည် Konakli နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း၌တည်းခိုနိုင်ပြီ
Istanbul ရှိဘတ်စ်ကား ၂ စီးတွင်ဖြစ်ပွားသော Density Driver ကိုယာဉ်မောင်းများကပြောကြသည်
IETT ဘတ်စ်ကားများမှ Coronavirus အစီအမံများကိုလျစ်လျူရှုသော“ ဖွဲ့စည်းထားသောဘေး”
မက္ကဆီကိုတွင်မြေအောက်ရထားနှစ်စင်းတိုက် မိ၍ ၁ ဦး သေ ၄၁ ဦး ဒဏ်ရာရသည်
Coronavirus ဆိုတာဘာလဲ။ ဘယ်လိုကူးစက်သလဲ။
Balıkesirရှိ Traffic Lights at Stay ကိုခေါ်ပါ
Bursa ရှိနေအိမ် - အိမ်တွင်ဆောင်ပုဒ်များတပ်ဆင်ထားသောဒီဂျစ်တယ်ဖန်သားပြင်နှင့်အသွားအလာအလင်းများ
Milli Gökbeyရဟတ်ယာဉ်မှအစ Propeller
National Electric Train ၏ ဦး နှောက်နှင့်နှလုံးကို ASELSAN အားအပ်နှင်းထားသည်
Boğaçay 38 Tugboat အထိမ်းအမှတ်
ပြည်တွင်းမော်တော်ယာဉ်စက်ရုံအတွက် EIA လုပ်ငန်းစဉ်စတင်သည်
IETT သည် Fleet Tracking Centre နှင့်ချက်ချင်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်သည်
Corona စိတ်ဖိစီးမှုကိုဆန့်ကျင်သော IETT ၀ န်ထမ်းများအားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှု
TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar ဒေသဆိုင်ရာမန်နေဂျာကိုခန့်အပ်ခဲ့သည်
Coronavirus ထိတ်လန့်မှုသည် Izmir Metropolitan Municipality .. ! ၆ လွှာကိုကယ်ဆယ်ခဲ့သည်
ဂျာမန်ဘဏ္Financeာရေး ၀ န်ကြီး Schaefer သည်မြန်နှုန်းမြင့်လိုင်းပေါ်တွင်သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်
amomamoğlu၏ဘတ်စ်ကားဖြင့်ပြည့်နေသောကုမ္ပဏီမှ“ တုန့်ပြန်မှုနိုင်ငံရေးသာဖြစ်ပါကသူရဲကောင်း” ထံမှပြင်းထန်သောတုန့်ပြန်မှု
ကမ္ဘာပေါ်တွင် Coronavirus ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်သည် ၆၇၇,၀၀၀ သေ။ ၃၁,၀၀၀ ကျော်ခဲ့သည်